Jehovah Adasefo baahen na inyim hɔn? Hɛn mu bi yɛ w’efipamfo, skuulfo anaa w’edwumamufo. Bi so a, yɛnye wo abɔ Bible mu nkɔmbɔ pɛn. Yɛyɛ ebɛn nkorɔfo ankasa, na ebɛnadze ntsi na yɛkã hɛn gyedzi ho asɛm kyerɛ afofor?
Yɛtse dɛ nyimpa biara. Ɔsorsor beebi a hɛn mu biara fifi na hɛn asetsena mu nsɛm so gu ahorow. Hɛn mu binom wɔ hɔ a nkan no nna yɛwɔ ɔsom fofor mu, na nna binom so nngye Nyankopɔn nndzi. Naaso, ansaana yɛrebɛyɛ Adasefo no, hɛn mu biara gyee mber hwehwɛɛ dza Bible no kyerɛkyerɛ no mu yie paa. (Ndwuma 17:11) Yɛgyee dza yerusũa no too mu, na hɛnankasa sii gyinae dɛ yɛbɔsom Jehovah Nyankopɔn.
Yenya Bible a yerusũa no do mfaso. Tse dɛ nyimpa biara no, hɛn so yɛwɔ hɛn haw nye mberɛwyɛ ahorow a ɔwɔ dɛ yegyina ano. Naaso, osian Bible ngyinadosɛm a yɛdze bɔ hɛn bra dabiara ntsi, ɔama hɛn asetsena etu mpon ankasa. (Ndwom 128:1, 2) Iyi nye siantsir kor ntsi a yɛkã ndzɛmba pa a yesũa wɔ Bible mu no kyerɛ afofor no.
Yɛdze Nyankopɔn gyinapɛn ahorow bɔ hɛn bra. Dɛm gyinapɛn ahorow yi a ɔwɔ Bible no mu no, boa hɛn ma yenya asetsena pa nye obu ma afofor. Ɔma yɛda su ahorow bi tse dɛ nokwardzi nye ayamuyie edzi. Bible gyinapɛn yi boa ma yɛbɔ bra pa na yenya apɔwmudzen, afei ɔma koryɛ ba ebusua mu na yɛyɛ ɔman mba pa so. Osiandɛ yenyim paa dɛ “Nyankopɔn nnhwɛ nyimpa enyim” ntsi, yebu hɛnho dɛ amanaman ntamu ebusua a hɛn gyedzi ama yɛayɛ kor, a beebi a yefi mmfa ho. Ɔwɔ mu dɛ yɛtse dɛ nyimpa biara dze, naaso yɛkã bɔ mu yɛ nyimpa soronko.​—Ndwuma 4:13; 10:34, 35.
Ɔkwan bɛn do na Jehovah Adasefo tse dɛ nyimpa biara?
Woana ne gyinapɛn na Jehovah Adasefo sũa fi Bible no mu, na mfaso bɛn na woenya efi do?
Ibesi Dɛn Abɛyɛ Nyankopɔn Ne Nyɛnko?
Ibotum abɔ wo bra ma aasɔ Jehovah n’enyi. Nokwasɛm nye dɛ, ibotum abɛyɛ ne nyɛnko.
Ɔkwan Pa a Wɔfa Do Som Nyankopɔn
Hwehwɛ nsɛntsitsir esia a ɔma yehu hɔn a wɔsom Nyankopɔn wɔ nokwar mu no.